AmaNdiya aseMajuba amathuba emisebenzi 🥇 Dubai City Inkampani eGulf
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at August 30, 2018
AmaNdiya emisebenzi ye-Kuwait
AmaNdiya eKuwait amathuba emisebenzi manje asevulekile. I-athikili eyenzelwe ngokukhethekile i Indian abasebenzi eKuwait. Inkampani yethu ibheke ukusiza amaNdiya. AmaNdiya eKuwait imisebenzi futhi amathuba emisebenzi yabasebenzi basePakistan. Ngokuqina kwethu, ungathola ukuthi ungawathola kanjani amathuba. Ngomklami othile ziqondise by Dubai City Inkampani abaphathi. Singa ukubeka izidingo endaweni yesigodi. Futhi ngalokhu, sibeka eKhayit. Ngokuvamile, noma eqinile ukuqasha. Futhi manje sinezinkontileka eziningana ezinkampani ze-Kuwait. Ngakho-ke, kubalulekile ukuzama amasevisi wethu. I I-Duba City City Inkampani inikeza amathiphu neziqondiso. Ngemuva kwalokho lokho kuzoholela ekutheni abafuna umsebenzi baqhubeke nokusebenzela izinkulungwane zabo umsebenzi abafuna kanye nokuqasha Kwamanye Amazwe.
inkampani yethu ukusiza ngemisebenzi ye-Gulf. Unalokhu engqondweni, iKuwait iyamangalisa indawo labasebenzi. Futhi kunalokho, kuningi AmaNdiya ase-Kuwait. Futhi ngasikhathi sinye, silindele ukukubeka. Ngokuvamile, izinkontileka zokuqashwa eKuwait. Kuqalwe ukugeleza kuya enkampanini yethu e2010. Futhi kusukela lapho siqala ukusiza amaNdiya afuna umsebenzi eKuwait futhi kunjalo Dubai. Zethu ibhizinisi okuhlosiwe kwakungu ukuhamba nabazingeli bemisebenzi ukuze bafinyelele emakethe yomsebenzi. Kusukela ibhizinisi lihamba, inkampani yethu ikhule ngokuningana. Futhi saxhumana nezinye izinkampani ku UAE. Ngaphezu kwalokho, izinhloso zethu zesikhathi esizayo ngukuthi zibe ngenye yezithandwa kakhulu imithombo yemisebenzi yeGulf.
Ukuthola umsebenzi ofanele eKuwait. Kukhona eziningana amaqiniso abalulekile angavamisile ukunakwa abafuna umsebenzi. Isibonelo, isimo sengqondo esingalungile, kanye nompofu, saqala phansi. Icebo elilula ngisho negama le abaphathi bokuqasha. Futhi ngisho hhayi ukubeka inombolo entsha yocingo noma imeyili kuhlelo lokusebenza lomsebenzi. Amaphutha alula anjalo. Ngokuvamile, ukwenza imisebenzi yaseNdiya e-Kuwait ayiphumelelanga.
Abantu bafuna umsebenzi nsuku zonke. Futhi ngenhloso yokuthola umsebenzi yenza noma yini. Ngakho-ke, ukungazi kwamaphuzu amaningana esikushoyo. Nakanjani wenze umsebenzi wakho wokufuna ungasebenzi. Futhi eqinisweni, kulesi sihloko, sikhuluma isizathu. Kungani kunjalo iningi labantu abafuna umsebenzi livame ukubhekana nobunzima kuzo ukusesha umsebenzi e-Kuwait? Akuwona amaNdiya kuphela. ngezansi ongakwenza thola izimpendulo ezilula nemibuzo.
Imisebenzi yokufundisa e-Kuwait izikole zaseNdiya
Izikole ezizimele e-Kuwait. Ingabe omunye ohlakaniphile ushukumisela umsebenzi omusha. Ngaphezu kwalokho, kukhona okuningi abantu baseNdiya e-Kuwait. Futhi ngalokhu engqondweni, ukusebenza emkhakheni wezemfundo. Ngokuqinisekile kufanele kucatshangelwe. Isibonelo, zikhona imisebenzi eminingana inikezwa kumawebhusayithi abo. Kuze kube manje, kukhona ngaphezu kwe-5 izinkulungwane zemisebenzi zinikezwayo.
Ukuqina kwethu, ngokuvamile, ukusiza abasebenzi abasebenza. Ngoba ukuthola umsebenzi eKwait Uthisha waseNdiya. Kubonakala kuthinta kanzima ukuphatha. Ngakho-ke, abamele inkampani yethu babeke izinkampani ezithile. Ngakolunye uhlangothi, umuntu osebenzayo kufanele futhi alayishe i-CV kwifemu yethu. Ngoba amaNdiya aseKuwait athungatha imisebenzi. Yikuphi esikwenzayo okungcono kakhulu.
Izikole zabafundisi baseNdiya e-Kuwait
I-United School School.
Isikole saseBrithani saseKwait.
Fahaheel Al-Watanieh Izikole zaseNdunankulu zaseNdiya
I-Salmiya Indian Model School
I-Kuwait Isikole SesiNgisi
Isikole sase-New English
Abafuna umsebenzi wase-India kumele bafinyelele abaqashi!
Ngakho, Ufuna ama-ejenti aqashwa ngokuphelele?. Ekuqaleni, kufanele ubenze babonakale kuwe. Kusho ukuthini lokhu?. Ngokuvamile, ukuze uqashelwe. Abafuna umsebenzi bayadingeka ukuze uthathe ukunakwa. Ngoba kuzokwenza, kuthinte ukusesha komsebenzi wakho. Ngokuvamile, ukucinga kwakho komsebenzi. Kuncike ngempela. Esikhathini sesimiso sesikhathi. Ngenxa yokucwaninga kwezomsebenzi kuxhomeke kulokho umsebenzi ongashesha ngokushesha.
Abafuna umsebenzi abangaba khona. Ake sibhekane nakho, sithumele nge-100 CVS. Futhi ngaphezu kuka-30 wezincwadi zokumboza kubaphathi abaqashisayo. Ngaphezu kwalokho, izicelo zomsebenzi ezenziwe kwiwebhusayithi. Bese iyaqala futhi nokusebenza kuzwakale kubaqashi. Futhi ekugcineni, abafuna umsebenzi bazodumala kuphela ngokuphendula okuncane. Lapho-ke uzobe uhlela lokhu ukudumazeka kusekhanda lakho. Futhi kufanele uphinde unake amaNdiya aseKuwait athungatha imisebenzi.
Kungani ungatholi umsebenzi wokunikezwa?
Inkampani engase ibe khona ayiqashi ku-Kuwait.
Isicelo sakho somsebenzi asiphelelanga.
Mhlawumbe umqashi obukeza izinhlelo zokusebenza akatholakali.
Umlayezo ongafinyeleleki ngefayela lakho lokuqalisa kabusha.
Enye kungenzeka iphutha ku-imeyili yakho.
Mhlawumbe kuyinto engalungile eyenziwe, ikheli, amaphutha esipelingi.
Mhlawumbe, awufanelekeli ukufaneleka kwesithuba esingenzeka.
Ukuqashwa umphathi idinga isikhathi esithe xaxa ukubuyekeza isicelo sakho somsebenzi.
Qala ngokuqashwa kwama-e-Kuwait
Ngakho-ke, njengoba ubona kunezizathu eziningana amaNdiya e-Kuwait imisebenzi ayisekwanga. Ngokuvamile, iqiniso liwukuthi, laba: abantu bakhona ukuthumela kuqhubeka nokuqasha ama-agent. Futhi isizathu sokungaphenduli kwemisebenzi e-Kuwait. Ngokuqinisekile yilokho ngoba abaqashi noma abaqashi bahlale befuna okuhle kakhulu. Ungase ucabange ukuthi ngimnandi ngokwanele. Kodwa empeleni, kunezinto eziningi okumelwe zibhekane nazo. Enye into eqinisekile, the ukuqasha umphathi kunemali yokuchitha nokuqasha abantu abasha e-Kuwait.
Isizathu sokuthi bangakubizi lapho. Ingabe leyo yimizamo yakho emincane. Kufanele uyilwele, hhayi nje uthumele i-CV. Esinye isibonelo ukuthi awaphoqi ngokwanele. Ikakhulu ngesipiliyoni sabo senkampani. Uma uthumela i-CV yakho noma incwadi yokumboza. Ungase ukhulume ngokujwayelekile, ungabakhombisi nganoma iyiphi indlela. Olunye uhlangothi lomdanso wukuthi ufanelwe ukuchitha isikhathi sakho.
Yiziphi amabhizinisi, izinkampani kanye nabaqashi abanentshisekelo?
Okokuqala, kungukuthi imali. Izinkampani azibheki imfundo enhle, izikole ezingcono noma ezinye iziphesheli. Bafuna kuphela ukwenza imali. Ingabe leyo ngu-Online, noma ibhizinisi lokudayisa e-Kuwait. Ngokuvamile, uma ungomunye wamaNdiya ase-Kuwait abafuna imisebenzi. Udinga nakanjani ukukhuthaza abaqashi nokuqasha abaphathi. Indlela engcono kakhulu, yiqiniso, kuwukuthi uthengise wena ngokwakho njengesisebenzi esisebenzayo.
Faka isicelo sakho somsebenzi njengokuthenga insiza yakho. Ngakolunye uhlangothi, i into yokuqala okudingeka uyenze ukuyiphatha ngendlela eyiyo. Ukucacisa wena nomsebenzi wakho. Ngokuvamile, bese kuthi a isisebenzi esisebenzayo idinga ukugxila emkhakheni owodwa. Ukwenza umthelela kuleyo ndawo yokusebenza. Bese ubakhombisa kancane ukuthi bakho isipiliyoni nemfundo zingabalethela imali.
Njengomunye wamaNdiya emisebenzini ye-Kuwait udinga uku:
Ekuqaleni, hlola okuhlangenwe nakho kwakho kanye namakhono akho endaweni.
Isinyathelo sesibili, ngokuvamile hlola imakethe yakho. Ngaphezu kwalokho, wakho i-specialty career ngokubhekisisa isicelo sakho somsebenzi.
Okwesithathu, thumela ukukhetha kwakho kohlelo lokusebenza ngokubonisa abaqashi izinzuzo zokuba nesisebenzi esisha ebhizinisini.
Isiphetho sabantu abafuna umsebenzi waseNdiya e-Kuwait?
Ukuze ube isisebenzi e-Kuwait. Kufanele uhlole okuhlangenwe nakho kwakho kuqala. Futhi ngokuqinisekile hlola kungenzeka ku-Kuwait. Okokuqala -Google futhi kumaNdiya aseKuwait isebenza ngamathuba. Nezinkampani eziningi eziningi. Njenge okungase kukuqashe lapho. Ngakho-ke, amaNdiya aseKuwait imisebenzi ayatholakala. Ngokuvamile, zama ukuba ikhono lakho elikhethekile eMpumalanga Ephakathi.
Ngemuva kwalokho zibuze umbuzo obaluleke kakhulu. Ngingakusebenzisa kanjani ulwazi lwami uqobo? Bese uthole unkulunkulu imisebenzi enikezwa eKuwait njenge abavela eNdiya. Futhi ngalokhu engqondweni, zizame ukuthola umsebenzi. Ngokushesha ngangokunokwenzeka. Futhi ngaphandle kokusizwa kwanoma yimuphi umuntu. Uzokwazi ukuthola abaqashi abaphezulu. Ngakho-ke bheka inkampani yethu Layisha kabusha ingxenye. Futhi zama ukuthola imisebenzi eminingi inikeza ngokusemandleni akho.
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka imihlahlandlela emihle yemisebenzi e-United Arab Emirates. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu futhi ukuqashwa e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.